I-Ganga @ Aashraya: I-Himalayan Farmstay Cottage - I-Airbnb
I-Ganga @ Aashraya: I-Himalayan Farmstay Cottage
I-Aashraya yindawo ekhethekile yokuphumula yase-Himalayan esogwini lomfula i-Ganga, edolobhaneni elincane elingaba amakhilomitha angu-45 ngaphambi kwe-Rishikesh. Izungezwe luhlaza oluhlaza okotshani, umsindo ohlaba umxhwele womfula, kanye nezingoma ezimnandi zezinyoni ezihlukahlukene, le ndawo ilungele umthandi wemvelo kuwe.
"I-Ganga" ingenye yezindlwana ezingu-03 ezinomoya oshisayo/ezifudunyeziwe ezinemiphakathi emihle namafasitela amakhulu wengilazi akuvumela ukuba ujabule endaweni ezungezile.
Ikotishi ngalinye licishe libe ngamamitha-skwele ayi-1000 ngobukhulu futhi linombhede ophindwe kabili nendawo eyanele eminye imibhede engu-02 eyengeziwe ukuze kuhlaliswe ingqikithi yeqembu elingu-04 pax endlini encane ngayinye. Sizibekele izindinganiso eziphakeme kakhulu. Umqondo wawuwukusebenzisa usimende omncane ngangokunokwenzeka hhayi i-RCC. Sasifuna ukusebenzisa ukwaziswa kwasendaweni okuningi ngangokunokwenzeka. Wonke amagumbi ethu ane-air-conditioner yokupholisa kanye neyokubasa izinkuni zokufudumeza futhi siqoqa izinkuni ezifile ukuze sizishise kuma-heaters amagumbi ethu.
I-Aashraya iyi-6000 sq. ft. yokwakhiwa kwamatshe okomile, okuhlanganisa izindlu ze-03, indawo yokudlela evamile kanye nekhishi. Itholakala ngendlela enjalo, ukuze ithuthukise ukubukwa, ukukhanya kwelanga nobumfihlo.
Uma uthanda ukuphila okunempilo, ukuba luhlaza okotshani, umqondo wokugaywa kabusha/ukwenza kabusha amabhayisikili cishe yonke into nokuba into eyodwa nemvelo, lena indawo ekahle kuwe.
Ingadi yethu yonke i-100% yemvelo, sigaya kabusha yonke into futhi akukho okushiya izakhiwo zethu njengemfucuza. Uphahla lufakwe izikhwama ze-jute ezigaywe kabusha. Kuze kube manje sesitshale izihlahla ezicela ku-200 ezihlanganisa ikakhulukazi izihlahla zezithelo futhi ukudla kwethu okuningi kulinywa emapulazini ethu.
Ngaphandle kwezinto ezikhangayo ezaziwa kakhulu eRishikesh, kunezinto eziningi ongazenza e-Aashraya -
Ukuphumula, ukwenza ingadi, ukusiza epulazini (sikhuthaza ukubamba iqhaza epulazini), ukuzindla kanye ne-yoga ogwini lolwandle, i-hydrotherapy empophomeni enhle (etholakala nje ngamamitha angu-800 ukusuka endaweni yethu) kanye nosebe lolwandle oluyintombi (imizuzu engu-15 ukuya phambili), ukuhamba ngezinyawo. kumzila wokuhamba we-Badrinath wasendulo noma nje ukuthatha uhambo lokuzilibazisa emadolobheni aseduze nasethempelini.
Siphinde futhi sihlele izinkundla zokucobelelana ngolwazi e-Aashraya ukuze sifundise abantu ngokukhuphula amabhayisikili, ukulima okusimeme, ukuphila okusimeme, ukungalahli lutho, njll. Singakujabulela ukwabelana, ukufunda, nokwandisa ulwazi lwethu nawe.
U-Depi, umsingathi wakho, uhamba kakhulu ngakho angahle angabi khona ngaso sonke isikhathi. Kodwa-ke, lapho ekhona, uthanda ukusebenzelana nezivakashi futhi acobelelane ngezindaba.
Siqashe abasebenzi bendawo futhi abasebenzi bangaxhumana ngesiNgisi esiphukile.
U-Depi, umsingathi wakho, uhamba kakhulu ngakho angahle angabi khona ngaso sonke isikhathi. Kodwa-ke, lapho ekhona, uthanda ukusebenzelana nezivakashi futhi acobelelane ngezindaba…